किन चिलाउँछ हत्केला, के हत्केला चिलाउँदा पैसा आउँछ ? – Gaule Media ::
Home/रोचक/किन चिलाउँछ हत्केला, के हत्केला चिलाउँदा पैसा आउँछ ?
किन चिलाउँछ हत्केला, के हत्केला चिलाउँदा पैसा आउँछ ?
ramsharan२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०१:५६
परम्परागत मान्यता अनुसार हत्केला चिलाउँदा पैसा आउँछ या जान्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । प्रचलनमा दाहिने हात चिलायो भने पैसा जान्छ भन्ने भनाइ छ भने देब्रे हात चिलायो भने पैसा आउँछ भन्ने चलन छ ।
धेरैले हत्केला चिलाएको कुरालाइ आय वा व्ययसँग हेरेपनि चिकित्सकहरूले भने यसलार्इ मान्दैनन् । हत्केला चिलायो कि कसैको पैसा आउने र कसैको जाने हुन्छ भनेर मानिसहरु भन्ने गरेको हामी सुन्दछौँ । तर, हत्केला चिलाउनु पैसासँग कुनै पनि तरिकाले सम्बन्ध नहुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । हत्केला चिलाउनु रोग नै भने होइन । रोग नभएपनि विभिन्न तत्वहको परिणाम हो तथा रोग लाग्न सक्ने संकेत हो ।
छालाको कोषहरु तीब्र बृद्धि भएमा पनि हत्केला चिलाउने गर्दछ । कोषहरु छालाको सतहमा जम्मा भएपछि यस्तो हुन्छ। छालालाई मानिसले आफैँ कन्याउँदा पनि यस्तो समस्या आउँछ ।
झिंगा हत्केलाको माथिल्लो सतहमा बस्दा यो समस्या आउँछ । बढी भिडभाड भएको ठाँउमा झिंगाको संक्रमण हुने गर्छ । विशेष गरी बालबालिकामा छालाको एलर्जी हुने गर्दछ । हत्केला धेरै नै चिलायो भने मधुमेह हो कि भनेर चेकअप गर्नु पर्दछ । हत्केला चिलाउनु मधुमेहको संकेत पनि हो ।
न्यूलाईट अँग्रेजी आवासीय माविमा २८ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
९ पुष २०७६, बुधबार १४:३७
२० कार्तिक २०७४, सोमबार १३:५९
हलोविन हाँन्टेड हाउस मल्ल मल्ल होटेलमा भब्यताका साथ सम्पन्न
२० कार्तिक २०७४, सोमबार ०१:२२
के तपाई पत्याउनु हुन्छ?यस्तो कुखुरा जुन घाँटी काटेपछि पनि डेढ वर्ष बाँच्यो
१९ कार्तिक २०७४, आईतवार ०६:२८